Horudhac Bilaashka ah ee Internetka
Waad ku mahadsantahay xiisaha aad u leedahay barnaamijyada guryaha ee St. Cloud HRA. Waxaan haynaa liistooyinka sugitaanka ee barnaamijyadayada guryaha sida waafaqsan Sharciyada Dawlada Dhexe ee Federaalka Codsigeena horudhaca internetka waa hab sahlan, talaabo talaabo tallaabo ah si aad magacaaga ugu hesho liistada sugitaanka.
Waa inaad buuxisaa codsiga oo idil ee codsiga inuu noqdo mid ansax ah.
Ka hor inta aanad bilaabin codsiga, waa inaad leedahay magacyada, taariikhda dhalashada, iyo Lambarada Soshiyaal Sikiyuuritiga ee loogu talagalay dhammaan xubnaha qoyska. Waa inaad sidoo kale ogtahay cadadka dakhliga, hantida, iyo qarashka xubin kasta oo qoyska ka tirsan.
Haddii aadan hubin barnaamijka guriyeynta ama hantida ku habboon adiga, dib ugu noqo oo dib u fiiri sharaxaadda guriga iyo sharaxaadda barnaamijka boggeena intaanad bilaabin codsiga.
Haddii aad qabto wax su'aalo ah, waxaad nala soo xiriiri kartaa:
Cinwaanka: St. Cloud HRA
Guryaha Dadweynaha ama guryaha kirada ah, waxaad codsan kartaa wakhti kasta.
Markaad buuxiso codsiga, raadi calaamadda soo socda:
* - Waxay muujisaa in macluumaadka loo baahan yahay
Muhiim: Si aad mid uga guurto waa in oo kaliya badhanka hoose ee codsiga. (Badhanka Bilowga waa hoose. Tallaabooyinka kale waxay leeyihiin Next, Back, Confirm, iyo / ama Ku soo Gudbaan qaybaha hoose ee kuu ogolaanaya inaad horey u socoto oo aad dib ugu noqotid codsiga.) Adigoo isticmaalaya wax WAXYAALO KALE , oo ay ku jirto midigta gujisid jiirka iyo xulashada Back ama Forward, waxay keeni kartaa qalad waxayna kugu qasbi kartaa inaad bilowdo cusub codsiga.
Riix batoonka billawda si aad u bilowdo codsigaaga.